Amacwecwe kaNifayi, aye eziintlobo ezimbini: Amacwecwe amancinane namacwecwe amakhulu. Awangaphambili ayengqale ingakumbi kwizinto zomoya nobufundisi neemfundiso zabaprofeti, ngeli lixa asele ekhankanyiwe ayezaliswe ingakumbi yimbali yezomhlaba yabo bantu zinxulumene nabo (1 Nifayi 9:2–4). Ukusuka kwixesha likaMozaya, nangona kunjalo, amacwecwe amakhulu kanjalo ayequke neminye imiba eyintloko ebalulekileyo yezomoya.
Amacwecwe kaMormoni, aqulathe isishwankathelo sikaMormoni ukusuka kumacwecwe amakhulu kaNifayi, nezinye iinkcazelo ezininzi. La macwecwe kanjalo akwaqulathe nokuqhubekeka kwembali nguMormoni nezongezelelo ngunyana wakhe uMoronayi.
Amacwecwe kaEtere, anika imbali yamaYeredayithi. Le mbali yashwankathelwa nguMoronayi, owafakela iinkcazelo ezizezakhe waza wadibanisa imbali kunye nembali jikelele phantsi kwegama “Ncwadi kaEtere.”
Amacwecwe oBhedu aziswa ngabantu bakaLihayi ukusuka eYerusalem ngowama-600 P.K. La ayequlathe “iincwadi ezintlanu zikaMoses, … kwakunye nembali yamaYuda ukususela ekuqalekeni, … ukuhla ukuya ekusungulweni kolawulo lukaZedekiya, ukumkani wamaYuda; kwakunye neziprofetho zabaprofeti abangcwele” (1 Nifayi 5:11–13). Izicatshulwa eziliqela kula macwecwe, ezicaphula uIsaya nabanye abaprofeti bebhayibhile kwakunye nabangengabo abebhayibhile, ziyavela kwiNcwadi kaMormoni.
INcwadi kaMormoni iquka inxalenye eziphambili ezilishumi elinesihlanu okanye amacandelo, awaziwa, ngokukodwa, njengencwadi, eziqhele ukubizwa ngegama lombhali wazo oyintloko. Isiqingatha sokuqala (ezintandathu zokuqala, eziphela ngo-Omnayi) yinguqulelo esuka kumacwecwe amancinane kaNifayi. Phakathi kweencwadi zikaOmnayi nezikaMozaya kukho isifakelo esibizwa aMazwi kaMormoni. Esi sifakelo sihlanganisa imbali ekrolwe kumacwecwe amancinane nesishwankathelo sikaMormoni samacwecwe amakhulu.
Esona siqingatha side, ukusuka kuMozaya ukuya kuMormoni isahluko 7, yinguqulelo kaMormoni yesishwankathelo samacwecwe amakhulu kaNifayi. Isiqingatha sokugqibela, ukusuka kuMormoni isahluko 8 ukuya esiphelweni somqulu, sakrolwa ngunyana kaMormoni uMoronayi, owathi akuba eyigqibile imbali yobomi bukayise, wenza isishwankathelo sembali yamaYeredayithi (njengeNcwadi kaEtere) waza kamva wongeza iinxalenye ezibizwa njengeNcwadi kaMoronayi.
Ngowama okanye malunga nonyaka wama-421 E.K., uMoronayi, owokugqibela kubaprofeti-babhali-mbali bamaNifayithi, wayitywina imbali engcwele waza wayifihla phezulu eNkosini, ukuze iziswe ngaphambili kwimihla yokugqibela, njengoko kwaxelwayo ngelizwi likaThixo ngabaprofeti Bakhe bamandulo. Ngowe-1823 E.K., kwayena lo Moronayi, ngoko esisiqu esivusiweyo, wahambela uMprofeti uJoseph Smith waza kamva wanikezela kuye amacwecwe akroliweyo.
Ngokolu hlelo: Iphepha lesihloko semvelo, elandulela kamsinyane iphepha leziqulatho, lithatyathwe emacwecweni kwaye liyinxenye yeziqendwana ezinyulu. Iintshayelelo eziluhlobo olunye loonobumba ezibukekela, ezinje ngezikuNifayi 1 nakamsinyane ukwandulela uMozaya isahluko 9, zikwayinxalenye yeziqendwana ezinyulu. Iintshayelelo ezibukekela ezinje ngezikwizihloko zezahluko, azizizo iziqalo zeziqendwana kodwa zingamancedo okufunda ngokuphonononga ziqukelwe ukunceda ekufundeni.
Ezinye iziphoso ezingephi zeziqendwana beziqhutyekekiswa kwiintlelo ezidlulileyo zeNcwadi kaMormoni epapashwe ngesiNgesi. Olu hlelo luqulathe izilungiso ezibonakala zifanelekile ekwenzeni umsebenzi wamkeleke kwimithetho yemibhalo-ngqangi epapashwe ngaphambili neentlelo zangaphambili ezazihlelwe nguMprofeti uJoseph Smith.